Xidhiidh Cusub Oo La Helay Inta u dhaxaysa Alzheimers iyo Immune Cell Disfunctions
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Xidhiidh Cusub Oo La Helay Inta u dhaxaysa Alzheimers iyo Immune Cell Disfunctions
Barashada sababaha qalafsan ee cudurka Alzheimers, iyo sida loo daweyn karo loogana hortagayo xaaladdan, waxay la mid tahay xallinta halxiraalaha qaybo badan, iyadoo saynisyahannadu mid kastaa uu la tacaalayo qayb yar, iyagoo aan hubin sida ay ugu habboon tahay sawirka weyn. Hadda, cilmi-baarayaasha machadyada Gladstone waxay go'aamiyeen sida qaybo badan oo ka mid ah qaybaha halxiraalaha ee aan hore loo xidhin ay isugu habboon yihiin.
Daraasad lagu daabacay joornaalka iScience, kooxdu waxay muujisay in dhaqdhaqaaqa suuxdinta ee qarsoon ay dhiirigeliso bararka maskaxda ee aan caadiga ahayn ee moodooyinka jiirka ee u ekaysiinaya dhinacyada muhiimka ah ee cudurka Alzheimers. Saynis yahanadu waxay muujinayaan in ciyaartoy badan oo loo yaqaan cudurka Alzheimers ay ku habboon yihiin xidhiidhkan xiisaha leh ee ka dhexeeya habka dareemayaasha iyo habka difaaca jirka, oo ay ku jiraan borotiinka tau, oo inta badan la qaldo oo la isku daro maskaxda buka, iyo TREM2, oo ah khatarta khatarta ah ee cudurka.
"Natiijooyinkayagu waxay soo jeedinayaan siyaabaha looga hortagayo loogana soo horjeedo cilladaha Alzheimers ee la xiriira labadaba shabakadaha maskaxda iyo hawlaha difaaca," ayuu yiri Lennart Mucke, MD, oo ah agaasimaha Machadka Gladstone ee Cudurada Neerfaha iyo qoraa sare oo daraasaddan cusub ah. "Waxqabadyadani waxay yareyn karaan calaamadaha cudurka waxayna xitaa caawin karaan wax ka beddelka habka cudurka."
Isku xirka Dhaqdhaqaaqa Qallalka iyo Bararka Maskaxda
Saynis yahanadu waxay ogaadeen in muddo ah in cudurka Alzheimers uu la xiriiro bararka joogtada ah ee maskaxda. Dareewalka bararkaan wuxuu u muuqdaa inuu yahay ururinta borotiinka amyloid ee qaabka "plaques", oo ah calaamadda neerfaha ee xanuunka.
Daraasadda cusub, cilmi-baarayaashu waxay aqoonsadeen dhaqdhaqaaqa suuxdinta ee aan qallafsanayn inuu yahay darawal kale oo muhiim ah oo bararka maskaxda daba-dheeraada ee moodeelka jiirka ee Alzheimer-ka. Noocan khiyaanada leh ee dhaqdhaqaaqa suuxdinta waxay sidoo kale ku dhacdaa qayb la taaban karo oo dadka qaba cudurka Alzheimers waxayna noqon kartaa saadaaliya hoos u dhaca garashada degdegga ah ee bukaanka.
"Hal dariiqo ah oo hawshan suuxdinta hoose ee bukaan-socodka ay u dardargelin karto hoos u dhaca garashada ayaa ah iyada oo kor u qaadeysa caabuqa maskaxda," ayay tiri Melanie Das, PhD, saynisyahan ka tirsan kooxda Mucke iyo qoraaga hormuudka ah ee warqadda. "Waan ku faraxsanahay inaan helno laba waxqabad oo daweyn ah oo xakameynaya labadaba dhaqdhaqaaqa suuxdinta iyo bararka maskaxda."
Qaabka jiirka, saynisyahannadu waxay ka hortageen labadaba cilladaha aan caadiga ahayn iyagoo isticmaalaya injineernimada hidde-sidaha si ay u baabi'iyaan borotiinka tau, kaas oo kor u qaada hyperexcitability neuronal (fidinta neurons badan oo isku mar ah). Waxay sidoo kale awoodeen inay beddelaan isbeddellada shabakada neerfaha iyo unugyada difaaca, ugu yaraan qayb ahaan, iyagoo ku daaweeyay jiirarka daawada suuxdinta leh ee levetiracetam.
Tijaabo caafimaad oo dhowaan la sameeyay oo levetiracetam ah oo ka soo baxday shaqadii hore ee Mucke ayaa shaaca ka qaaday faa'iidooyinka garashada ee bukaannada qaba cudurka Alzheimers iyo dhaqdhaqaaqa suuxdinta ee kiliinikada, iyo daweynta hoos u dhigista ayaa ku hoos jira horumarin, sidoo kale dhisitaanka cilmi baarista shaybaarka Mucke. Daraasadda cusub ayaa dib u xaqiijinaysa sida ay daawayntani ugu rajo weyn tahay dadka ku jira marxaladaha hore ee cudurka Alzheimers.
Shaqada cusub ee Hiddaha Halista Alzheimer ee Saamaynta leh
Caabuqa oo dhan isku mid maaha; waxay keeni kartaa cudur, sida xaaladaha xaaladaha sida rheumatoid arthritis-ka, ama waxay ka caawin kartaa jirka inuu bogsado, tusaale ahaan, ka dib markii la gooyo.
"Waxaa muhiim ah in la kala saaro in cudurka Alzheimers uu keeno barar aad u xun, guuldarada caabuqa wanaagsan, ama labadaba," ayuu yiri Mucke, oo sidoo kale ah Professor Joseph B. Martin oo ah borofisar ku takhasusay Neuroscience iyo borofisar ku takhasusay neerfaha ee UC San Francisco. "Markaad fiiriso firfircoonida unugyada bararka ee maskaxdu isla markiiba kuu sheegi mayso in hawlgelintu ay wanaagsan tahay ama ay xun tahay, markaa waxaan go'aansanay inaan sii baarno."
Mucke iyo asxaabtiisu waxay ogaadeen in, markii ay yareeyeen dhaqdhaqaaqa suuxdinta ee maskaxda jiirka, mid ka mid ah qodobbada caabuqa ee ugu badan ee saameeya waa TREM2, oo ay soo saarto microglia, unugyada difaaca maskaxda ee degan. Dadka qaba noocyada hidde-sideyaasha TREM2 waxay laba ilaa afar jeer uga dhow yihiin inay qaadaan cudurka Alzheimers marka loo eego dadka qaba TREM2 caadiga ah, laakiin saynisyahannadu waxay weli isku dayayaan inay qeexaan doorka saxda ah ee unugyadani ka ciyaaro caafimaadka iyo cudurrada.
Saynis yahanadu markii hore waxay muujiyeen in TREM2 ay ku korodhay maskaxda jiirarka leh amyloid plaques, laakiin la dhimay ka dib markii la xakameeyey hawlahooda suuxdin. Si loo ogaado sababta, waxay baareen in TREM2 ay saamayso u nuglaanta jiirarka ilaa qiyaas yar oo daroogo ah oo sababi karta dhaqdhaqaaqa suuxdinta. Jiirarka leh heerarka hoos u dhaca ee TREM2 ayaa muujiyay waxqabadyo suuxdin ah oo ka jawaabaya daawadan marka loo eego jiirarka leh heerarka caadiga ah ee TREM2, taas oo soo jeedinaysa in TREM2 ay ka caawiso microglia inay xakamayso hawlaha neuronal ee aan caadiga ahayn.
"Doorkan TREM2 wuxuu ahaa mid lama filaan ah wuxuuna soo jeedinayaa in heerarka korodhka TREM2 ee maskaxdu ay dhab ahaantii u adeegi karaan ujeedo faa'iido leh," ayuu yidhi Das. "TREM2 ayaa ugu horrayn la daraaseeyey iyada oo la xiriirta calaamadaha cudurka Alzheimers sida taarikada iyo tangles. Halkan, waxaan ku ogaanay in molecule-kani uu sidoo kale door ku leeyahay habaynta hawlaha shabakada neerfaha."
"Hawlaha hidda-socodka ee TREM2 ee kordhiya khatarta cudurka Alzheimers waxay u muuqdaan inay wax u dhimayaan shaqadiisa," ayuu raaciyay Mucke. "Haddii TREM2 aysan si sax ah u shaqeynin, waxay ku adkaan kartaa unugyada difaaca si ay u xakameeyaan hyperexcitability neuronal, taas oo iyana gacan ka geysan karta horumarinta cudurka Alzheimers iyo dardargelinta hoos u dhaca garashada."
Dhowr shirkadood oo dawooyin ah ayaa soo saaraya unugyada difaaca jirka iyo xeryahooda kale si ay u xoojiyaan shaqada TREM2, ugu horrayn si kor loogu qaado ka saarista lakabyada amyloid. Sida laga soo xigtay Mucke, daawaynta noocan oo kale ah ayaa sidoo kale laga yaabaa inay gacan ka geystaan ​​xakamaynta dhaqdhaqaaqa shabakada aan caadiga ahayn ee cudurka Alzheimers iyo xaaladaha la xiriira.